ဆန်ဖရန်စစ္စကို ကနေ ရှန်ဟိုင်း အတွက် လေယာဉ်လက်မှတ် ၅၀ နေ့တိုင်း ၀ယ်တဲ့ Apple | Myanmar Mobile App
Home Trending Enterprise ဆန်ဖရန်စစ္စကို ကနေ ရှန်ဟိုင်း အတွက် လေယာဉ်လက်မှတ် ၅၀ နေ့တိုင်း ၀ယ်တဲ့ Apple
ဆန်ဖရန်စစ္စကို ကနေ ရှန်ဟိုင်း အတွက် လေယာဉ်လက်မှတ် ၅၀ နေ့တိုင်း ၀ယ်တဲ့ Apple
Apple ဟာ San Francisco International Airport မှာ United Airlines ရဲ့ အကြီး ဆုံး ဖောက်သည် ဖြစ်ပါတယ်။ လေကြောင်းလိုင်းရဲ့ သတင်းအချက်အလက်များအရ Apple ဟာ နှစ်တိုင်း လေယာဉ်လက်မှတ်ဖိုး ဒေါ်လာ သန်း ၁၅၀ လောက် သုံးပါတယ်။ ရှန်ဟိုင်းကို သွားတဲ့ Business အဆင့် လက်မှတ် ၅၀ ကို နေ့စဉ်ဝယ်ပါတယ်။
တရုတ်မှာ Apple အတွက် ဖုန်း အစိတ်အပိုင်း ထုတ်လုပ်သူများစွာ ရှိပါတယ်။ အဲဒီအတွက် Shanghai Pudong Airport ကို ၀န်ထမ်းများစွာ စေလွှတ်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Apple ဟာ Shanghai Pudong Airport ကနေ Shanghai ကို သွားတဲ့ လေယာဉ်စားရိတ်အတွက် နှစ်စဉ် ဒေါ်လာ ၃၅ သန်း အသုံးပြုပါတယ်။
Apple ၀န်ထမ်းများ အသွားအများဆုံး လမ်းကြောင်း ၁၀ ခုက အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
1. Shanghai (PVG)
2. Hong Kong (HKG)
3. Taipei (TPE)
4. London (LHR)
5. South Korea (ICN)
6. Singapore (SIN)
7. Munich (MUC)
8. Tokyo (HND)
9. Beijing (PEK)
10. Israel (TLV)
Apple ဟာ ကမ္ဘာအ၀န်းမှာ ၀န်ထမ်းပေါင်း ၁၃၀ ၀၀ ကျော် ရှိပါတယ်။ Apple ဟာ Bay Area မှာလည်း United Airlines ရဲ့ အကြီးဆုံး ဖောက်သည်ဖြစ်ပါတယ်။ Facebook , Google တို့ဟာ United Airlines မှာ နှစ်စဉ် ဒေါ်လာ ၃၄ သန်း သုံးကြပြီး Apple ရဲ့ သန်း ၁၅၀ ထက် အများကြီး နည်းပါတယ်။
ဆနျဖရနျစစ်စကို ကနေ ရှနျဟိုငျး အတှကျ လယောဉျလကျမှတျ ၅၀ နတေို့ငျး ဝယျတဲ့ Apple
Apple ဟာ San Francisco International Airport မှာ United Airlines ရဲ့ အကွီး ဆုံး ဖောကျသညျ ဖွဈပါတယျ။ လကွေောငျးလိုငျးရဲ့ သတငျးအခကျြအလကျမြားအရ Apple ဟာ နှဈတိုငျး လယောဉျလကျမှတျဖိုး ဒျေါလာ သနျး ၁၅၀ လောကျ သုံးပါတယျ။ ရှနျဟိုငျးကို သှားတဲ့ Business အဆငျ့ လကျမှတျ ၅၀ ကို နစေ့ဉျဝယျပါတယျ။
တရုတျမှာ Apple အတှကျ ဖုနျး အစိတျအပိုငျး ထုတျလုပျသူမြားစှာ ရှိပါတယျ။ အဲဒီအတှကျ Shanghai Pudong Airport ကို ဝနျထမျးမြားစှာ စလှေတျနတော ဖွဈပါတယျ။ Apple ဟာ Shanghai Pudong Airport ကနေ Shanghai ကို သှားတဲ့ လယောဉျစားရိတျအတှကျ နှဈစဉျ ဒျေါလာ ၃၅ သနျး အသုံးပွုပါတယျ။
Apple ဝနျထမျးမြား အသှားအမြားဆုံး လမျးကွောငျး ၁၀ ခုက အောကျပါအတိုငျး ဖွဈပါတယျ။
South Korea (ICN)
Apple ဟာ ကမ်ဘာအဝနျးမှာ ဝနျထမျးပေါငျး ၁၃၀ ၀၀ ကြျော ရှိပါတယျ။ Apple ဟာ Bay Area မှာလညျး United Airlines ရဲ့ အကွီးဆုံး ဖောကျသညျဖွဈပါတယျ။ Facebook , Google တို့ဟာ United Airlines မှာ နှဈစဉျ ဒျေါလာ ၃၄ သနျး သုံးကွပွီး Apple ရဲ့ သနျး ၁၅၀ ထကျ အမြားကွီး နညျးပါတယျ။
Previous articleတရုတ် အစိုးရအတွက် သူလျှို လုပ်ပေးနေတယ်လို့ ယူဆတဲ့ အတွက် Huawei ရဲ့ အရာရှိ ထိန်းသိမ်းခံရ
Next articleကားနဲ့ တွဲဖက် သုံးနိုင်တဲ့ စမတ်နာရီကို ပြသလိုက်တဲ့ Mercedes-Benz